Mayelana NATHI - TIANJIN CHENG YANG INDUSTRIAL CO., LTD
UTianjin Chengyang Industrial Co., Ltd.
Sisebenza ngezinto zokushisa eziphakeme.
I-Tianjin Chengyang Industrial Co., Ltd itholakala ethekwini ledolobha laseTianjin enyakatho neChina. Inkampani yethu ihlanganisa indawo engama-32000 sqm, enabasebenzi abangaphezu kuka-200 kanye nenani lokukhipha lonyaka elingaphezu kwezigidi eziyi-15 zama-yuan. Le nkampani inezinto zokukhiqiza ezithuthukile futhi manje seyinama-rapier looms aseduze kuka-120, imishini emi-3 yokudaya izindwangu, imishini yokuhlanganisa i-aluminium engu-4 nomugqa owodwa wokukhiqiza izindwangu. Sisebenza ngezinto zokushisa eziphakeme. Inkampani yethu ebandakanyekile endwangu ye-fiberglass eyakhiwe ngabicah, i-PU camera fiberglass indwangu, i-Teflon ingubo yengilazi, i-aluminium foil indwangu eboshwe, indwangu engangenamlilo, ingubo yokushisela, indwangu yengilazi, esetshenziswa kakhulu ekwakhiweni, ezokuthutha, i-elekthronikhi, imboni yamakhemikhali, ukuvikelwa kwemvelo, ezokuvikela zikazwelonke nezinye izimboni. Kunikezelwe ekulawulweni kwekhwalithi eqinile nokusebenza kwamakhasimende okucabangayo, abasebenzi bethu abanolwazi bahlala batholakala ukuxoxa ngezidingo zakho nokuqinisekisa ukwaneliseka okugcwele kwamakhasimende. Imikhiqizo yethu ayithengisi kahle kuphela kuwo wonke amadolobha nezifundazwe ezizungeze iChina kepha futhi ithengiselwe umhlaba wonke, njengeMelika, Australia, Canada, Japan, India, South Korea, Holland, Norway, Singapore njalonjalo.
Inkampani yethu inamandla amakhulu wobuchwepheshe, ikhwalithi ephezulu, ukunikezwa okufika ngesikhathi, insizakalo enhle yokuthengisa ngemuva, idumela eliphakeme, inkampani "ekuphikeleni, ekuqineni, ekubhekaneni nomoya omusha" ekubhekeni ekuphathweni kwemininingwane, phansi phansi, ukuphayona nokuheha. . Kulungiswe ukuthengwa kwempahla eluhlaza okwenziwe ngefektri yokuqala, ukutholwa kobuciko obuphambili kunikezela ngomkhiqizo wekilasi lokuqala lomsebenzisi nensizakalo ephelele. Inkampani izimisele ukusebenzisana neningi labasebenzisi nabantu abanokuqonda. Inhloso yethu ekwakheni inani lamakhasimende, ngabomvu ukubambisana nawe!
Umshini wendwangu ye-Silicon fiberglass
Sizama ukunikeza amakhasimende ngensizakalo esheshayo nokulethwa ngesikhathi esifanele. Siphinde sibe professional yokuthengisa ithimba ukuqinisekisa ukuphelela namakhasimende. Ukuxhumana nokusebenza okuhle; Samukela ama-oda we-OEM ne-ODM. Singasiza amakhasimende ukuthi azakhele owabo umkhiqizo kusuka kubukhulu, ubude, umbala nokufakwa komkhiqizo; sinolwazi lweminyaka eminingi lokuthekelisa, kungasiza amakhasimende ukuxazulula ezokuhamba nokunye okuningi Ngokuya ngezinkinga. Noma ngabe ukhetha umkhiqizo wamanje kukhathalogi yethu noma ufuna usizo lobunjiniyela lohlelo lwakho lokusebenza, ungakhuluma nesikhungo sethu samakhasimende.
Indwangu ye-Acrylic fiberglass, Indwangu ye-fiberglass ye-Aluminized, Acrylic Camera fiberglass, Indwangu i-fiberglass, Indwangu Eboshwe Nge-fiberglass Indwangu, Indwangu ye-Acrylic Camera fiberglass,